I-American Pop Musician noMongameli weNgoma uDan Hartman
Ibali loMculi uDan Hartman
Konke malunga nomculo weMerika wasePopular of the 70s and 80s
UDaniel Daniel Earl Hartman ngoDisemba 8, 1950, eHarrisburg, ePennsylvania, uDan Hartman waya kuba yinto yezona zixhobo ezigubungelekileyo kunye nezixhasayo kwii-1970 kunye ne-80 yama-pop pop yaseMelika phambi kokufa kwakhe ngokungenangqondo ngo-Matshi 22, 1994.
Umculi-umculi waseMerika wakwazi ukufeza umsebenzi omude kunye nobunzima kumashishini omculo, esebenza ngokubanzi kunye nomnye wabantwana abahlonishwayo bomculo we-rock-Johnny no-Edgar Winter - wayengumakhi we-70s classic staple, kwaye 'ii-80s kunye nesinye seziqulatho ezinqabileyo ezilishumi - "Ride Free."
Ngexesha leminyaka kamva, uHartman wachithe ixesha elide ebhala iingoma zabanye abaculi kunye nabasakhulayo njengomvelisi womculo ofunayo, kodwa impembelelo yakhe kwiminyaka engaphezu kwama-20 yomculo wezobugcisa ihlala isisigxina esifanelekileyo - yomculo womculo we pop.
Iminyaka yokuqala kunye neeNtshumo zee-1970
U-Hartman wavela ekuqaleni kwee-1970 iimpawu zengxondorha njengengqungquthela ye-wunderkind, ekhonza njengengxenye ebalulekileyo kwisandi kunye nengoma ye-Johnny Winter Band kunye ne-Edgar Winter Group. Ubumnandi basebusika bobabini beedayidi, kodwa ngamnye ngokubanzi wayenomdinga wezinto zonke zomculo we-Hartman.
Ngomnye wokugqibela, uHartman waqulunqa waza wahlabelela phambili kwi-classic yama-70 yama-rock eqhubeka nokuhlawula i-endorphin izahlulelo kubaphulaphuli bomculo njengento edlalwa ngokuphindaphindiweyo kodwa ehlala ivuya "I-Free Ride". Ukuphumla uHartman wayenze i-solo yakhe yokuqala yerekhodi kwaye yavela njengomhlanganisi ofunyenwe ngabaculi abangafaniyo njenge- Muddy Waters ngexesha lokugqibela kwe-70s.
Ngelo xesha, uHartman naye wenza uphawu lwakhe kwi- disco music scene scene, egalela ezimbini iingoma eziphambili- "I-Instant Replay" kunye ne "Ukukhanyisa Umlilo Wami" - kuloo ndawo.
Ukubetha iNtloko yakhe kuma-1980
Ebudeni bee-1980, uHartman waqala ukuhamba kwisigaba sokutyikitya somsebenzi wakhe we-solo apho wayeza kuvelisa iirekhodi ezine ze-solo kwiminyaka eyi-10 ezayo, ininzi yazo eyayijoliswe kumsindo ogqithisileyo womculo obonisa ngakumbi i-albhamu yakhe yokuqala-ngo-1975 " Imifanekiso "- kunokuba umsebenzi wakhe owawuthatyathwa emva koko wafumana ukuchongwa okuthe ngqo.
Oku akuzange kuguqulele kwimpumelelo enkulu ngokukhawuleza, njengoko ngo-1981 "Kubuhlungu Ukuba Uthandane " kwakuyi-failure yokuthengisa. Nangona kunjalo, yenze isigaba se-Hartman's 'quessessential moment' elangeni, ngo-1984 "Ndingayifungela Ngawe " LP kunye - ngakumbi ngokukhethekileyo - elilodwa eligqibeleleyo elipheleleyo elilodwa elilodwa elibizwa ngokuba yi-Top 10 smash emhlabeni wonke.
Le ngoma yayifake i-Hartman eyona nto ingcono njengomculi-mculo - ingqungquthela yokuthandana yothando kunye nokuzinikela ekusebenziseni ubugcisa obuya kubakho ukukhuthaza abaculi kwizizukulwana eza kuza.
Iminyaka Kamva kunye nokufa kwangaphambili
Ngelishwa, lo mzuzu wesiginari awuzange uguqulwe kwinkululeko yobugcisa kunye neentsimbi ze-solo ze-gravita uHartman ezifunayo. Efuna ukwandisa ukuziphendulela kwakhe kwezobugcisa, u-"White Boy" ka-1986 wabonakala kwinkampani yakhe yokurekhoda ukuba ibe yinguqu eguqukayo, kwaye umculo akazange awubone ukukhanya kosuku lwemini. U-Hartman walandela ngo-1989 "Omtsha oBlue Blue Clear," kodwa ngelo xesha uninzi lomdla wakhe wawuphendulela kwimveliso kunye nasemva kwee-scenes ingoma yokubhala.
Ngokudabukisayo, ngasekuqaleni kweminyaka eyi-90, uHartman wayenayo i-HIV, inyaniso wayeyigcina kuyo yonke into kwada kwafa ngo-1994.
Nangona wayezibambe ngandlela-mculo wezoomculo engenelisiseko ngokupheleleyo ukuba amvumele ngokupheleleyo ahlolisise ukudibanisa kwakhe okumangalisa, uHartman nokho isalokhu ingahlali kodwa ingabalulekanga kodwa kubaluleke kakhulu kwi-1970s neye-1980.
Abahlabeleli be-Rock abaphezulu be-20 bonke ixesha
Eyona mihle kaK Keith Urban
Ukuhlaselwa kwePearl Harbour
U-Vrais unobani - isiNgesi isiNgesi iCognates - P
9 Abaphangi Abakhulu Abafa Ngokuncinane